ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့ 
ကျွန်ုပ် အသိဥာဏ်တိုးပွားရသော နေ့ တစ်နေ့ 
Posted by မောင် ပေ on Oct 7, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary |6comments
ကွမ်းပို့ စ် လက်တမ်း စာတို
ကျွန်ုပ် မောင်ပေ နေထိုင်သော မန်းတလေးမြို့ ကြီးမှာ ဆိုင်ကယ်မြို့ တော် ဟု တင်စားခေါ်ဆိုကြသည် ကို အခြားမြို့ သူမြို့ သားများ ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည် ။
မကြားဖူးသော အခြားမြို့ သူား များ နှင့် နိုင်ငံခြားတွင် ငယ်စဉ်ကတဲက ကြီးပြင်းရှင်သန်လာသူများ အနေဖြင့် ကိုပေါက် (မန်းတလေး) ၏ ပို့ စ်တွင် ဓါတ်ပုံများ သွားကြည့်နိုင်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ် ငယ်စဉ်ကမူ ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ယနေ့ လောက်မများပြားခဲ့ပေ ။ ထို့ အပြင် ကျွန်ုပ် တို့ ငယ်စဉ်က စက်ဘီးမြို့ တော် ဟု လည်း ခေါ်ခဲ့သေးသည် ကို မှတ်မိနေသည် ။
ဟိုးတုန်းကတော့ ဂျပန်ဆိုင်ကယ် များနှင့် အင်္ဂလန်ထုတ် ဘီအက်စ်အေ အနည်းငယ် သာ ရှိခဲ့သည် ။ နောက်ပိုင်း ယိုးဒယား ဆိုင်ကယ်များ ဝင်လာသည် ။
၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်တွင် တရုတ်ဆိုင်ကယ်များ အနည်းငယ်ရှိလာပြီး အဲဒီနောက် တစ်မြို့ လုံး တရုတ်ဆိုင်ကယ်များသာ ။
ယခင်က သွားရေးလာရေး ဆိုလျှင် စက်ဘီးကို အလွယ်တကူ အသုံးပြုခဲ့ကြသည် ။
ယနေ့ ခေတ်တွင်မူ ဆိုင်ကယ်ပေါ့ ။
66 ခုနှစ်ထုတ် ဘီအက်စ်အေ
( မှတ်ချက် ။ ။ ဘီအက်စ်အေ ဆိုင်ကယ် နှင့် ဟွန်ဒါ စူပါကပ် ဆိုင်ကယ်ပုံ မှာ google မှာ ရှာကူးပြီး တင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။)
ယနေ့ လက်ရှိ အချိန်တွင် မန်းတလေး မြို့ သူ ၊ မြို့ သား များသည် ဆိုင်ကယ် ကို အသက်ကြီးငယ်မရွေး ကိုယ်တိုင် မောင်းကာစီးနေကြသည် ။
ကိုယ်တတ်နိုင်လျှင် တတ်နိုင်သလို သုံးလေးငါး သိန်းတန်မှသည် သိန်းရာကျော် အထိ ဝယ်စီးကြသည် ။
သိန်းရာကျော် ဆိုသည် မှာ YAMAHA အမျိုးအစား 2011 မော်ဒယ် WR တစ်စီး ဆိုလျှင် ၊ လိုင်စင်အပါအဝင် အသစ်တစ်စီးကို ၁၀၅ သိန်းကျပ် တန်ဘိုးရှိသည် ။
Harley davidson အမျိုးအစား များဆိုလျှင် သိန်းတစ်ရာကျော် အထက်တွေ ချည်း ၊ ဒါတောင် ဝယ်ချင်လျှင် ရှာဖို့ မလွယ် ။ ပိုင်ရှင်များက မရောင်းသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။
တစ်ရက်တွင် ကျွန်ုပ် မောင်ပေ တစ်ယောက် ညနေခင်း အလုပ်ပြီးချိန် ၊ ညစာစားရန်အလို့ ငှာ လဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည် ။
လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် စားပွဲခုံများ ခင်းပြီး ညပိုင်းမှ ဖွင့်သော ဆိုင်လေးဖြစ်သည် ။
ထိုဆိုင်မှ ထမင်းကြော် နှင့် စမူဆာ ကောင်းသဖြင့် မောင်ပေ တစ်ယောက် အမြဲလို ထိုင်ဖြစ်သည် ။
နောက်ပြီး အဲဒီဆိုင်လေး မှာ အခြေခံလူတန်းစား ၊ အလုပ်ကြမ်းသမား ၊ ဆိုက်ကားနင်းသူ ၊ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမား စသဖြင့် စုံသည် ။
သူတို့ ဆီမှ ပြောစကားများ ကို ကြားလို သဖြင့် ထိုင်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည် ။
မောင်ပေ တစ်ယောက် အလုပ်ပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်၍ လူလည်း တစ်ကျော့ကျော့ ၊ ဆိုင်ကယ်လေး ကလည်း ရေဆေးထားသဖြင့် တမော့မော့ ပေါ့ ။
ဆိုင်ထဲ ဝင်ထိုင်ပြီး စားစရာမျာ မှာ အပြီး သကာလ ၊ မောင်ပေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားဝိုင်းမှ စကားသံများ ကို ကြားလာရသည် ။
သူတို့ ဘာတွေများ ပြောနေကြပါလိမ့် ဟု နားစွင့်နေလိုက်သည် ။
ထိုဝိုင်းတွင် အသက်၆၀ကျော် ယောက်ျားကြီး တစ်ဦး ၊ အသက် ၅၀ ကျော်ခန့် တစ်ဦး နှင့် အသက်၄၀ကျော် ယောက်ျားတစ်ဦးနှင့် သူ့ သမီး ၅တန်းကျောင်းသူလေး ။
အသက်၄၀ကျော် သားအဖ က မောင်ပေ့ ကို ကျောပေးထားသည် ။ ယောက်ျား၃ ဦး၏ ပုံစံ မှာ အပြင် ဈေးဆိုင်များ ၊ လုပ်ငန်းများမှ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ဟန်တူသည် ။
တစ်ယောက် က မောင်ပေ့ ဆိုင်ကယ် ကို သေချာကြည့်နေစဉ် အသက်၅၀ကျော်လူ က စပြောလာသည် ။ ထိုသူမှာ မောင်ပေ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သည် ။
၅၀= “ အခုနောက်ပိုင်း သွင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ အင်ဂျင် ခဏခဏ ကိုင် ရတယ် ဗျာ ” ( အင်ဂျင်ကိုင် = အင်ဂျင်ကျ/အင်ဂျင် မဆွဲတော့ သည်ကို ပြင်သည် )
အသက်၆၀ကျော် လူက ဘာမှ ဝင်မပြော ။
၄၀= “ ဟုတ်ပ ၊ ၂၀၀၈ တုန်းက ဝင်တဲ့ 125ဆိုင်ကယ်တွေများ ကောင်းလိုက်တာကိုး ”
၅၀+၆၀= “ ဘယ်လို ကောင်းတာလဲ ဗျ ”
၄၀= “ ဒီလိုဗျ ၊ ကျုပ်တို့ အလုပ်မှာ မတ္တရာကနေ အလုပ်လာလုပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိတယ် ၊ သူ့ ဆိုင်ကယ် က 125 ရုပ်ဆိုး ၊ မနက်ဆို မတ္တရာ ကနေ မန်းတလေး ကို မောင်းလာတယ် ၊ ညနေ ဆို မတ္တရာ ကို မောင်းပြန်တယ် ၊ ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ဗျ ၊ သူစီးလာတာဖြင့် ဘာမှ ကို မဖြစ်ဘူး ၊ အကောင်းကြီးပဲ ၊ ဒီ ၂၀၁၁ ဟိုတလော က မှ အင်ဂျင်ကျ လို့ ဝေ့ါရှော့ ထိုးလိုက်ရတယ် ၊ အခုတော့ ကောင်းသွားပါပြီ ဗျာ ” ( 125 ရုပ်ဆိုး ဆိုသည်မှာ 125 က အင်ဂျင်ပါဝါ ၊ ရုပ်ဆိုး က ဆိုင်ကယ်နာမည် )
သူတို့ စကားသံကြားရတော့ ၊ မောင်ပေ မျက်လုံးပြူးသွားသည် ။ “ ဟိုက်ရော..လွှတ်ကောင်းတဲ့ တရုတ်ဆိုင်ကယ်ပါကလား ၊ ငါဘာလို့ မသိခဲ့ပါလိမ့် ၊ ဒီလိုမှန်းသိ ယာမဟာ ဆိုင်ကယ် ကို ဈေးကြီးပေး မစီးပါဘူး ၊ တရုတ်ဘီး ဝယ်စီးပါတယ် ” ဟု တွေးမိသည် ။
အမှန်မှာ ဆိုင်ကယ် ဆိုလျှင် ၊ နေ့ စဉ်ပုံမှန်သာ စီးပါက ၊ အသုံးပြုပါက ၊ ဂျပန် ဖြစ်ဖြစ် ယိုးဒယားထုတ်ဖြစ်ဖြစ် အချိန်ကာလ နှစ်နှစ်သာ ကောင်းကောင်းခံသည် ။
နှစ်နှစ်ကျော်သည် နှင့် အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ပြင်ကြရသည် ။ တရုတ်မှ တင်သွင်းသော ဆိုင်ကယ် ဆိုလျှင် တော့ ပြောမနေနဲ့ တော့ ။ တစ်နှစ် ခံ လျှင် ကံကောင်း ပဲ ။
ဒါကလည်း ဖြစ်သင့်ပါသည် ။ တရုတ်ဆိုင်ကယ် တစ်စီး မှ ၇ သိန်းကျော် ဆိုလျှင် အကောင်းစား ရပြီ ။
ယိုးဒယား ဆိုင်ကယ် တစ်စီး ၁၄ သိန်းခန့် ရှိသည် ။
ယာမဟာ တွေ က တော့ သူ့ မော်ဒယ် အလိုက် ဈေးနှုန်းအသီးသီး ။
ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ဆိုတာကလည်း အင်ဂျင်ဝိုင်ကောင်းကောင်း ကို တစ်လတစ်ခါ လဲလှယ်ပေးမှ ၊ တစ်လတစ်ခါလောက် ချိန်းလျော့သည်ကို ပြန်တင်း ၊ ဘက်ထရီ စစ် ၊ အခြားလိုအပ်သည့် အပရိက လေးများ ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပေးမှ နှစ်နှစ်လောက် ကောင်းကောင်းခံသည် ။ တစ်ခုတော့ ရှိသည် ယိုးဒယား နှင့် ဂျပန် ဆိုင်ကယ် ကို လုံးဝ ဖြေးဖြေးကလေး စီး ၊ ချိုင့်မှန်သမျှ လုံးဝ ရှောင်မောင်းမည် ဆိုလျှင် တော့ ၃ နှစ်ကျော် ခန့် ခံသည်ကို တွေ့ရှိရသည် ။ သို့ သော် မည်သူမှ တော့ အမြဲတမ်း ဖြေးဖြေးလေး မစီးဖြစ်ကြ ။ ချိုင့်လုံးဝ ရှောင်မစီးနိုင်ကြသည် သာ များသည် ။
မန်းတလေး မြို့ ရှိ လမ်းများမှာ ၊ မိန်းလမ်းမကြီး များ သာ ချိုင့်ကင်းစင်သလောက်ရှိသည် ။ ကျန်လမ်းများ မှာ ချိုင့် အနည်းနှင့် အများဆိုသလို ရှိသည် ။
မတ္တရာ-မန်းတလေး လမ်းဆိုလျှင် လမ်းမှာ သက်သောင့်သက်သာ မဟုတ်သည် ကို သိရှိထားသော မောင်ပေ သည် ထို အသက်၄၀ကျော်လူ ပြောစကား ကို ကြားရသော အခါ ရယ်ချင်မိသွားသည် ။ သို့ သော်လည်း မရယ်ဖြစ်ခဲ့ပေ ။
အသက်၅၀လူက မောင်ပေ့ ဆိုင်ကယ် ကို တစ်ချက် ငေးကြည့်ရင်း စကားစလာသည် ။
“ ဟိုနေ့ ကဗျာ ၊ ကျွန်တော့် တူတော်မောင် လေ ၊ ဆိုင်ကယ်စီးတာများ ပြောပြချင်သေးတယ် ”
၄၀+၆၀= “ ဘယ်လို စီးတာလဲ ဗျ ၊ ပြောပါဦး ”
“ မန်းတလေး နန်းတွင်းအနောက်တံတားထိပ် ကနေ မင်းကွန်း ကို ဆိုင်ကယ် မောင်းသွားတာ ၊ 125 ရုပ်ဆိုး နဲ့ ၊ ၂၅ မိနစ် ပဲ ကြာတယ် ဗျ ”
အသက်၄၀လူနှင့်၆၀လူ တို့ မှာ နှုတ်ဆိတ်သွားကြသည် ။
မောင်ပေ တစ်ယောက်လည်း သောက်နေသော ရေနွေးသီးသွားသဖြင့် ၊ ဟန်မပျက်အောင် ပြန်ထိန်းရင်း အကြီးအကျယ် စဉ်းစားမိသွားသည် ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၊ ပြီးခဲ့သော ၂ ရက် က မှ ၊ အင်ဂျင်ပါဝါ၂၅၀ ရှိသော မောင်ပေ့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် စစ်ကိုင်းသို့ သွားခဲ့သည် ။ မောင်ပေ့ ဆိုင်ကယ် မှာ Jumping အမျိုးအစား ဖြစ်သည် ။ တော်ရုံ ချိုင့်များသော လမ်းလောက်ကတော့ ကီလို၅၀ ကျော်အထိ တင်မောင်းလို့ ရသည် ။ ရှေ့ ဖောက် ကစားသည် မှ လွဲပြီး ဘာမှ မဖြစ် ။ ဆိုင်ကယ် က ငြိမ်သက်စွာ ပြေးသည် ။ မန်းတလေးမြို့ အနောက်ဘက်ရှိ မြစ်နံဘေး မြို့ ပတ်လမ်း အတိုင်း အမြန်မောင်းချသွားသည် မှာ မန်းတလေး မှ စစ်ကိုင်းဧရာဝတီ တံတား အဆင်း မိနစ်၂၀ ကျော် ကြာသည် ကို သတိထားမိခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည် ။ ယခု မန်းတလေး-မင်းကွန်း ၂၅ မိနစ် ဖြင့် ရောက်အောင် မောင်းနိုင်သော အင်ဂျင်ပါဝါ 125 တရုတ်ဆိုင်ကယ် အကြောင်း ကြားလိုက်ရသောအခါ ၊ ယခု ပဲ ထိုဆိုင်ကယ်ကို ပြေးဝယ်ချင်စိတ် ပေါက်သွားမိသည် ။
သူတို့ စကားဝိုင်းသည် ခေတ္တမျှ တိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက် အသက်၆၀ကျော်လူက စကားစလာပြန်သည် ။
“ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော် ပြောရင် ယုံမလားတော့ မသိဘူး ”
၄၀+၅၀ = “ ဘာများလဲ ဗျ ၊ ကြားရတာပေါ့…လုပ်ပါဦး ”
“ ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက် ဆိုရင် ၊ ၂၀၀၂ လောက်တုန်းက တရုတ်ဆိုင်ကယ် တစ်စီး အသစ်ဝယ်စီးတာ ဗျာ ၊ သူ့ ဆိုင်ကယ် ကို သူ ကြိုက်လွန်းလို့ တဲ့ ၊ ကောင်းလွန်းလို့ တဲ့ ၊ နှစ်နှစ်လောက်နေတော့ ဆက်မစီးတော့ဘူး ၊ တစ်စစီ ဖြုတ်ပြီး သူ့ အိမ်က သေတ္တာထဲ မှာ သိမ်းထားတာဗျ ၊ ကညန ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် သက်တမ်း တိုးရတော့မယ် ဆိုတော့ မှ ၊ ဆိုင်ကယ် ကို ပြန်ကောက်ဆင် ပြီး ဆိုင်ကယ် လိုင်စင် သက်တမ်း သွားတိုးတာ ၊ ပြီးရင် တစ်စစီ ပြန်ဖြုတ်ပြီး ၊ သေတ္တာထဲ ပြန်သိမ်းပါလေရော ”
၄၀+၅၀ = “ ဗျာာာာာာ…. ”
အသက်၄၀ကျော်လူ နှင့် ၅၀ ကျော်လူတို့ မှာ ၊ ဘာမှ မပြောနိုင်ပဲ ဖြစ်သွားသည် ။
မောင်ပေ လည်း မောင်ပေ့ ဆိုင်ကယ် ကို ထိုသို့ လိုက်လုပ်လျှင် ကောင်းမလား ဟု စဉ်းစားမိသွားသည် ။
“ ငါကြိုက်လို့ စီးချင်လွန်းလို့ ဝယ်ထားတာပဲ ၊ တော်ပါပြီ မလုပ်တော့ပါဘူး ” ဟု စဉ်းစားမိသည် ။
ခဏနေတော့ သူတို့ လည်း စားပွဲထိုး ခေါ်ကာ ပိုက်ဆံရှင်းနေသည် ဖြစ်၍ မောင်ပေ လည်း ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ထွက်လာခဲ့သည် ။
စိတ်ထဲတွင်တော့ ကျေနပ်လာခဲ့သည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မန်းတလေး ဂေဇက်တွင် ရေးတင်စရာ ဇါတ်လမ်းအနည်းငယ် ရရှိခဲ့သည် မဟုတ်ပါလော ။
အမှန်ကတော့ သူတို့ ၏ တစ်နေ့ တာ အလုပ်ပြီးချိန် ၊ အပန်းဖြေချိန် ၊လဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ချိန်ကလေး ကို ၊ ဟုတ်သည်ရှိစေ မဟုတ်သည် ရှိစေ ၊ တွေ့ ကရာ ပါးစပ်ထဲ ရှိတာ ပြောနေကြခြင်း ဖြစ်သည် ။
စပ်စုသော မောင်ပေ တစ်ယောက် ကြားရတာ တစ်မျိုးထူးနေသဖြင့် ၊ ဆိုင်ကယ်စီးစာဖတ်သူများ အား ပြန်ရေးပြခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
———————– အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ———————–
ကိုရင်မောင်ပေ၏ ဆိုင်ကယ်ကို သွားရည်ယိုမိသော်ငြား အကျွန်ုပ်မှာ ဆိုင်ကယ်မစီးရဲချေတမုံ့။ မန်းလေးမှာ အကျွန်ုပ်၏သွေးသောက် ဘော်ဒါနှစ်ယောက်သည်လည်း ဆိုင်ကယ်ကြောင့် အခြားသောကမ္ဘာကိုသွားရောက် ခဲ့ကြချေပြီ။ သို့သော်ငြားလည်း မန်းသူမန်းသားလူအများကို အကျွန်ုပ် တစ်ခုမှာကြားလိုသည်မှာ ကိုရင်မောင်ပေ၏ အနီးအနား အပြောအဆိုအနေအထိုင် အပြုအမူများကို ဆင်ခြင် နိုင်ကြရန်သတိပေးလိုသည်။ တော်ကြာ နေ လူကြီးမင်းတို့၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုရင်မောင်ပေ တစ်ယောက် နိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ်ဖော်ချေက မခက်တုံလော……………….။
မောင်ပေတို့ မြို့ သားတွေ..ခေသူမဟုတ်ပါကလား..
တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကြွားသွားတာပဲ …
ရန်ကုန်သားများကတော့ ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ မြင်သာမြင် မကျင်ရတဲ့ဘ၀တွေပါ …
ရန်ကုန်သားတွေက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တစ်မူထူးပြီး
ဆိုင်ကယ်စီးခွင့် မရရှာ ကြဘူးဗျာ။
ထည့်သိမ်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ ဗျာ။
ယာဉ်ထိမ်းဖမ်းလေတိုင် 40000 ကျပ်နဲ့ပြန်ပြန်ရွေးနေရလို့
မတတ်နိုင်တာနဲ့ ရောင်းလိုက်ရပြီကွယ် ဆိုင်ကယ် စီချင်ပိုးကတော့မသေးပါဘူး
ဟုတ်တယ်နော်။ ရန်ကုန်မှာဆိုင်ကယ်စီးခွင့်ရရင်ကောင်းမယ်။ တော်ရုံတန်ရုံလူတန်းစားလည်းသွားရလာရတာအဆင်တော်တော်ပြေမယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတခါ ဇောင်းကြွတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းသမားတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကသိပ်ပြီးစိတ်အနှေင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်။